Nezvedu - Xuzhou Kanfur Electronic Technology Co., Ltd.
Xuzhou Kanfur Magetsi Technology Co., Ltd.
Yakagadzwa munaKurume 2012, Xuzhou Kanfur Electronic Technology Co, Ltd.i bhizimusi remazuva ano rehi-tech rinobatanidza R & D, dhizaini, Kugadzira, kugadzira nekutengesa, iri muChina Mining University Science Park muXuzhou. Pakutanga kwekambani, zvigadzirwa zvekurapa, kugadzirisa uye zvigadzirwa zvehutano semutsara mukuru wekuvandudza kambani.
Parizvino, kambani ine R & D timu ine hunyanzvi uye yakagadzika, INE INOZVIMBIRA R & D yepakati tekinoroji uye yemhando yekugadzira neyekugadzira tekinoroji, uye iro R & D timu ine yakasimba hunyanzvi uye yesainzi yekutsvagisa simba, zvigadzirwa zvese zvatinotengesa zvakasununguka yakagadzirirwa neboka redu reR & D uye iine kodzero dzakazvimirira dzakazvimirira dzepfuma.
Iyo kambani haina kukunda chete kukudzwa kwe "sainzi uye tekinoroji madiki uye epakati-epakati mabhizinesi", asi zvakare yakapasa iyo "Intellectual Property Management System Certification", zvigadzirwa zvekambani zvakapfuudza iyo European Union CE chitupa, FCC certification, ISET certification. Parizvino, kambani ine akati wandei emhando dzinopfuura makumi maviri mhando dzezvigadzirwa pamusika, izvo zvine hutachiona uye sterilization mashandiro ezvigadzirwa zvikuru irovhi yekuvharisa mwenje, zviridzwa zvekuona zvakatipoteredza zvine formaldehyde yekuona chiridzwa, inovhiya yekuvandudza, sauna kamuri controller. Iyo kambani zvakare inovimba neayo yayo R & D, kugadzirwa uye mamwe maindasitiri ngetani zvakanakira, kuEurope, North America, South Asia uye mimwe misika yekupa zvigadzirwa, yakahwina kuvimba kwevashandisi.
Kambani yedu ine zvakare yesainzi uye yakaoma chigadzirwa chemhando yekuongorora kugona, yemhando yepamusoro yekutarisa uye yekuyedza michina uye yakaoma system yekuyedza ndiyo chivimbo chehunhu hwehunhu hwekambani. Zvigadzirwa zvekambani zvinovimba nemhando yepamusoro, chikamu chemusika chinoramba chichiwedzera, uye kutengesa kuri kuramba kuchikura. Iyo kambani yakagadzira kuve tekinoroji yekuvandudza bhizinesi ine yakasarudzika emazuva ano maitiro. Kambani yedu inogara inonamatira kuhunyanzvi hwekuvandudza kwehunyanzvi hwe "tekinoroji yekutanga, mhando yekutanga", inoshingairira uye inobudirira inoshandisa manejimendi manejimendi manejimendi, uye yakazvipira kuve inotungamira indasitiri indasitiri yekuyera. Kwenguva yakareba, kambani yakazvipira kuvandudza zvakatenderedza zvinodiwa nevatengi, kushanda pamwe nevakavhurika vadyidzani, yakazvipira kupa zvakarongeka mhinduro, zvigadzirwa nemasevhisi, uye ichiita zvese zvayakanakira kugadzira kukosha kukuru kwevatengi. Munguva ino yehunyanzvi hwekugadzirwa kwezvinhu hwakazara nemikana, zvinetswa uye makwikwi, kuvandudza kwekambani kunovandudzwa. Tichaenderera mberi nekuvandudza manejimendi sisitimu, kuwedzera kuunzwa kwevashandi vesainzi uye tekinoroji, kutsvagisa nekusimudzira zvigadzirwa zvitsva nekusimudzira musika, kupa rutsigiro rwakasimba mukusimudzira nekusimudzira kwekambani. Iyo kambani ichave yakanangana nemusika, kusimudzira kambani kuvandudza nehunyanzvi hwekugadzira zvinhu, uye kuyedza kugonesa kambani kuti iite mipiro yepamusoro muzvigadzirwa zvekurapa, kugadzirisa uye misika yehutano.
With yakanaka kugadzirwa michina uye kunyatsoomerera yepamusoro kudzora. Kune yega yega chip, redunhu bhodhi kana chikamu, Nyaradzo inogona kudzora zvizere maitiro ese kubva mukuchengetedza kuti ushandise kuve nechokwadi cheyakagadzika mhando yechigadzirwa. Zvakare, iyo yemhando yepamusoro odhita usati wabva mufekitori ndiyo yakanyanya kuvimbiswa yemhando yepamusoro.